The Nightingale (2019) | MM Movie Store
ဒီတဈခါတော့ ပရိသတျသတျကွီးအတှကျImdb Rating 7.2/10, Rotten Tomatoes 86% တောငျရရှိထားတဲ့ကားကောငျးလေးတဈကားကိုတငျဆကျပေးခငျြပါတယျ။အားလုံးခဈြတဲ့ Me before you ဇာတျကားထဲကမငျးသားခြော Sam Claflin ကိုပုံစံအသဈတဈမြိုးနဲ့တှမွေ့ငျရမှာပါ။
ဇာတျလမျးအကဉျြးလေးကိုလဲဖျောပွလိုပါသေးတယျ။လောကဓံနဲ့ရငျဆိုငျခဲ့ရတဲ့ တေးသီငှကျလေးအကွောငျးပါပဲ။ကလဲရာဆိုတဲ့ အိုငျယာလနျသူလေးဟာဗွိတိသြှ စဈတပျတှကေို တေးသီခငျြးဆိုပွရတဲ့ တေးသီငှကျလေးပေါ့။သူ့မှာ ခဈြရတဲ့ခငျပှနျးနဲ့ ခဈြရတဲ့ သမီးလေးတဈယောကျရှိပါတယျ။
သူမအလုပျအကွှေးပွုနရေတဲ့ ဗွိတိသြှ တပျဖှဲ့ငယျလေးရဲ့လကျဖတငျနငျကတော့ သူမကိုထိပါးစျောကားပွီး ခြုပျကိုငျထားတဲ့သူပါ။တဈနမှေ့ာတော့ သူမရဲ့ဘဝထဲကိုကွံကွမ်မာဆိုးတဈခုဝငျရောကျလာပါတော့တယျ။သူမဘယျလိုဆကျဖွဈမယျ?
ဘာတှရေငျဆိုငျရမယျဆိုတာ စိတျလှုပျရှားစှာကွညျ့ရှုရမယျ့ကားလေးပါ။လူမြိုးရေးရာခှဲခွားမှုတှရေယျ၊ခဈြခွငျးမတ်ေတာရယျ၊ရိုးသားဖွူစငျမှုတှရေယျ ရောထှေးတငျဆကျထားတဲ့ဒီကားလေးနာမညျကတော့ The Nightingale (2019)ပါ
ဒီတစ်ခါတော့ ပရိသတ်သတ်ကြီးအတွက်Imdb Rating 7.2/10, Rotten Tomatoes 86% တောင်ရရှိထားတဲ့ကားကောင်းလေးတစ်ကားကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။အားလုံးချစ်တဲ့ Me before you ဇာတ်ကားထဲကမင်းသားချော Sam Claflin ကိုပုံစံအသစ်တစ်မျိုးနဲ့တွေ့မြင်ရမှာပါ။
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကိုလဲဖော်ပြလိုပါသေးတယ်။လောကဓံနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ တေးသီငှက်လေးအကြောင်းပါပဲ။ကလဲရာဆိုတဲ့ အိုင်ယာလန်သူလေးဟာဗြိတိသျှ စစ်တပ်တွေကို တေးသီချင်းဆိုပြရတဲ့ တေးသီငှက်လေးပေါ့။သူ့မှာ ချစ်ရတဲ့ခင်ပွန်းနဲ့ ချစ်ရတဲ့ သမီးလေးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။
သူမအလုပ်အကြွေးပြုနေရတဲ့ ဗြိတိသျှ တပ်ဖွဲ့ငယ်လေးရဲ့လက်ဖတင်နင်ကတော့ သူမကိုထိပါးစော်ကားပြီး ချုပ်ကိုင်ထားတဲ့သူပါ။တစ်နေ့မှာတော့ သူမရဲ့ဘဝထဲကိုကြံကြမ္မာဆိုးတစ်ခုဝင်ရောက်လာပါတော့တယ်။သူမဘယ်လိုဆက်ဖြစ်မယ်?
ဘာတွေရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတာ စိတ်လှုပ်ရှားစွာကြည့်ရှုရမယ့်ကားလေးပါ။လူမျိုးရေးရာခွဲခြားမှုတွေရယ်၊ချစ်ခြင်းမေတ္တာရယ်၊ရိုးသားဖြူစင်မှုတွေရယ် ရောထွေးတင်ဆက်ထားတဲ့ဒီကားလေးနာမည်ကတော့ The Nightingale (2019)ပါ